Soo hel ugu dambeyntii Sawirada ugu Fiican Fujifilm
Gadashada Guides Cameras
Best New Cameroon Fujifilm
Raadi Macluumaadkii ugu dambeeyey ee Koobiyooyinka FinePix Best
Fujifilm ayaa soo saartay dhowr kamaradood oo cusub 18-kii bilood ee ugu dambeeyay, oo ka soo jeeda nasiib darro iyo muraayadaha toogashada si kamarad adag "kamarad" ah oo lagu rakibo kamaradaha lensiga ah oo leh muraayado farshaxan oo waawayn oo ku yaala qoyskiisa FinePix ee kamaradaha. Halkan waxaa ah kamaradaha Fujifilm ee ugu wanaagsan.
01 ee 12
Qalabka sawirada waawayn iyo sawir-gacmeedka sawir-gacmeed ballaadhan ayaa ka dhigaya Fujifilm FinePix F900EXR mid ka mid ah moodooyinka xooggan ee aad u socotid suuqa hadda.
F900EXR wuxuu leeyahay 1/2-inch CMOS image sensor leh 16 MP oo xalka, 20x gawaarida muraayada indhaha, 1080p HD video capabilities, iyo 3.0-inch LCD. Waxaad ku garaaci kartaa RAW ama JPEG mid kamarad ah.
The FinePix F900EXR ayaa sidoo kale leh awoodda Wi-Fi. Fiiri kamarad fiiqan oo lagu heli karo indigo buluug, casaan, dahab, ama muraayado madow. More »
T300 , oo lagu magacaabo T305 qaybo ka mid ah aduunka, waxay qaadataa 14MP oo qaraar ah, 10x qalab casri ah, muuqaal LCD ah oo 3-inch, iyo 720p HD video. Waxaad yeelan doontaa midabyo badan oo aad ku kala dooran kartid jirdhiska, sidoo kale Fujifilm waxay bixisaa T300 ee madow, buluug, buluug, dahabka shamaca, iyo guduud. T300 waxay qiyaastaa 0,9 inji oo kali ah. Lens 10X zoom zoom waa muuqaal weyn oo loogu talagalay kamarad ku jirta kala duwanaanta qiimaha. Read More »
Fujifilm X100S waa kamarad qaali ah oo qaali ah, laakiin naqshadeeda casriga ah ayaa la mid ah tan ugu dambeysa iyo sawirada ugu wanaagsan ee sawirada taasoo ka caawisay inay ku guulaysato abaalmarinta EISA .
Qeybta muhiimka ah ee X100S waa 23.6 x 15.8mm CMOS image image, taas oo bixisa tayada muuqaalka sare 16.3MP oo xalka.
Shirkadda FinePix X100S, oo ah casriyeynta sannadkii hore ee FinePix X100 , waxay leedahay fotomar f / 2 23mm oo aan lahayn bandhig. Waxaad isticmaali kartaa diirada gacanta oo leh kamaradan, adigana waxaad sawiri kartaa sawirada adiga oo isticmaalaya fiidiyaha ama 2.8-inch LCD. Waxay ku toogan kartaa 1080p HD video buuxa, sidoo kale.
Isku-duubidda muraayad tayo sare leh oo leh sawir-tayo sare oo tayo sare leh waa isku-dheelitir weyn oo loogu talagalay sawir-qaadayaasha khatarta ah kuwaas oo raadinaya moodhadhka ugu sarreeya ee tooska ah. More »
Fujifilm XP80 waxeey lee dahay dhibaatooyin, sida tayada sawirada, taas oo ka tagta kamaradaha maalinlaha ah. Si kastaba ha noqotee, cilladahaasi maaha sida muuqata markaad isbarbardhigayso XP80 si aad u hesho meel kale oo lagu soo qaado kamaradaha biyaha lagu ilaaliyo . Qiimaha FinePix XP80 waa dhamaadka hoose ee kamaradaha biyaha aan dhererka lahayn, taas oo ka dhigaysa qaab tayo fiican leh oo la tixgelinayo haddii aad rabto inaad ku isticmaasho xaalado adag. Read More »
Kaamirooyinka biyuhu ka muuqdaan ayaa u muuqda in ay sii kordhayaan caan, gaar ahaan dhibicda iyo dabeecadaha aan biyaha lahayn. Fujifilm waxay soo bandhigtay dhowr kamaradood oo kamarado ah sannadkan, oo ay ku jiraan FinePix XP170.
The XP170 waxay leedahay 14.4MP oo qiyaasta ah, 5x qalabka casriga ah ee indhaha, qiyaasta 2.7-inch, iyo 1080p HD video. XP170 waxay qiyaastaa 1 inji oo ah dhumucdiis.
Qaabkan Fujifilm wuxuu ka shaqeyn karaa illaa 33 fiit oo qoto dheer oo biyo ah, wuxuu ku noolaan karaa hoos u dhac ilaa 6 fuudh, waxana uu ka shaqeyn doonaa heerkulka sida ugu hooseeya-14 digrii Fahrenheit.
XP170 waxaa laga heli karaa muraayadaha buluuga ama orange-ga. Waxaan fursad u helay in aan dib u eego XP10 dhowr sano ka hor, waxaana u maleynayay inay ahayd baqshad balaadhan oo aan biyuhu lahayn. XP170 waxay ku xigtaa wadooyinkeeda. Read More »
Fujifilm X-A1 Mirrorless ILC
Fujifilm waa koobkii ugu dambeeyay ee koobi la'aanta ah ee 'DU' kamaradda DIL waa Fujifilm X-A1, qaabkani waxa uu kor u qaadayaa qaabka taxanaha heerka taxanaha ah.
Qaadashada heerarka soo-galitaanka kama tago X-A1 oo gaabis ah isbedelka muuqaalka, inkastoo. Fujifilm wuxuu ku daray 16.3 megapixel CMOS APS-C sawirka sawirka, taas oo ah inay abuurto tayada muuqaal weyn. Kamaradani waxa kale oo ka mid ah qalabixin sare oo leh 3.0-inch LCD, farshaxan hooseeya oo lagu toogtay dib u soo celinta, dib u dhac ku yimaada illaa 5.6 muraayad halkii labaad, fiilo dhejis ah, iyo qalabka RAW-duubka. More »
07 ka mid ah 12
Fujifilm X-A2 Mirrorless ILC
Fujifilm X-A2 kamarad la'aanta ayaa leh qaab isku dhafan oo ku habboon oo rafcaan u noqonaya bilawga iyo dhexdhexaadiyeyaasha, iyo weliba qiime macquul ah.
Fujifilm ayaa ugu fiican shaashadda X-A2, sababtoo ah muraayad aan muraayad ahayn oo sahlan in la isticmaalo oo muuqaalkeedu fiican yahay, wali waxay abuuri kartaa tayada muuqaal wanaagsan. Fujifilm ayaa X-A2 ka dhigtay shaashadda LCD-ka oo lagu qiyaaso 180 darajo oo buuxa si loogu oggolaado sawirro iyo sawirro aan caadi ahayn. Read More »
Fujifilm X-E1 waa qalab sawir leh oo muuqaal leh oo bixiya cabbir yar oo leh awoodo xoog leh.
Cimilada CMOS sawirada weyn waxay garaaci kartaa 16.3MP of resolution. Qiyaasaha yar ee macaamiishu waxay u ekaan karaan tayada muuqaalka sawirka X-E1.
TIPA abaalmarinta ku guuleysata X-E1 waxaa ku jira sawir-elektiroon elektaroonig ah, iyo sidoo kale shaashadda LCD-ga oo 2.8-inch ah. Waxay ku toogan kartaa fiidiyoow HD oo buuxa, wuxuu bixiyaa unug fiilo ah, oo aqbali kara noocyo kala duwan oo leysku beddelan karo kuwaas oo la shaqeyn doona Fujifilm X Lens-lens.
X-E1 wuxuu qiimeeyaa qiimaha $ 1,000 oo leh muraayada hore, sidaa daraadeed qaabkani uma diidi doono qof walba. Si kastaba ha ahaatee, waa sawir xoog leh oo muuqaal ah, kuwaas oo diyaar u ah jirdhis kamarad ah oo cabbiraya 1.5 sentimitir oo dhumucdiis ah (aan lahayn lens) waxaana laga heli karaa dhammaan madow ama lacag madow. More »
09 ka mid ah 12
Iyadoo Fujifilm X-F1, shirkaddu waxay abuurtay kamarad farsamo oo aad u fara badan oo soo jiidasho leh si ay ula socdaan fiiro gaar ah.
X-F1 wuxuu leeyahay madow, mugdi madow, ama muraayadaha kamarad fudud oo u eg sida maqaar. Saddexda kaamiradoodba waxay leeyihiin dhar bir ah.
F / 1.8 faleebo foosto ah oo ku saabsan X-F1 waa shey aad u sarreeya oo dhalada ah, inkastoo ay kaliya bixiso lens qumman ee gacanta 4X. X-F1 waxa kale oo uu leeyahay 12 mitir image image, 3.0-inch LCD, iyo awood buuxda oo HD video. Read More »
Fujifilm X-M1 Mirrorless ILC
Fujifilm waa saddexda jilbaha aan la jarjarin - X-M1 - ayaa ah qaabka ugu quruxda badan, oo bixiya sawir-sawir leh oo la mid ah cabbirka la midka ah waxa aad ka heli karto kamarad DSLR.
Fujifilm X-M1 DIL ayaa leh sawir-gacmeedka APS-C oo muujinaya 16.3MP oo qeexaya.
X-M1, oo qiyaastii 1.5 inji oo dhumucdiis ah oo aan lahayn lakiriye. oo ay ku jiraan 3.0-inch LCD , saacad bilawga ah 0.5 ilbiriqsi, duubista video 1080p oo buuxa, Wi-Fi-ku-dhejisan, iyo camal-garaaca RAW-ka.
X-M1 wuxuu isticmaali karaa Fujifilm XF ama XC-ladaha leysku beddeli karo. Waxaad ka heli kartaa X-M1 saddexda midab ee midabkoodu yahay, madow, lacag, ama bunni. Read More »
Fujifilm waa kamarad dijital ah oo kamarad ah oo Fujifilm waa kamarad sawir leh oo ay ku jiraan qaar ka mid ah muuqaalada ugu sareeya oo aad ka heli karto kamarad DSLR.
X-S1, oo lagu dhawaaqay Fujifilm oo lala xiriirinayo CES 2012 , waxay bixisaa fujinon 26x foornada indhoole ah. Waxaa ka mid ah flashbar popup iyo viewfinder, oo ay weheliso 3.0-inch, LCD-qiyaasta sare.
Shaxda X-S1, si kastaba ha ahaatee, waa sawirka muuqaalka weyn, taas oo ah dareeraha 2/3-inch. Tani waxay u oggolaaneysaa X-S1 in uu ka fiican yahay iftiinka hooseeya.
Ma arki doontid kamaradaha muraayadaha badan ee fiilada ah ee ku jira sicirka sare ee dhammaadka, sidaas darteed waxaa laga yaabaa in Fujifilm ay ku adagtahay in ay ku guulaysato wax badan oo cidhiidhi ah halkan, laakiin waa wax aan suurtogal ahayn in lagu doodo qaababka weyn ee kamaraddaan. Read More »
Fujifilm X-T1 Mirrorless ILC
Fujifilm X-T1 aan muuqaal lahayn ILC waxay bixisaa muuqaal gebi ahaanba ka duwan tan kaamirooyinka kale ee horumarsan ee suuqa. Kuwa isticmaala filimada filimka SLR ee ka soo jeeda dhowr sano ka hor waxay u mahadcelinayaan faraakihadaha kala duwan iyo badhamada Fujifilm ayaa ku jira X-T1, taas oo siineysa naqshad casri ah. Sababtoo ah garaamyadaas ayaa la is dul saaran yahay midba midka kale, qaar ka mid ah waxa laga yaabaa inay yar yahiin inay helaan iyo isticmaalaan raaxo-darro, laakiin muuqaalka x-rayka ee X-T1 weli wuu weyn yahay.
Sababtoo ah soo uruurinta garaacida waxaad sameyn kartaa dhamaanba isbeddelada X-T1 adigoo isticmaalaya garaacayaasha. Ma lahaan doontid qaab-dhaqameed caadi ah, halkaas oo aad dooran karto qaab-is-daba-deg ah oo toos ah.
Qiimaha qiimaha sare ee noocan oo kale ah Fujifilm X-T1 ayaan rafcaan u siineynin sawirqaade kasta, iyo xarriiqyada xariifka ah ayaa si weyn u xaddidi doonta dhagaystayaasha kartida leh ee qaabkani. Si kastaba ha ahaatee, tayada muuqaalka ee X-T1 iyo heerarka sarreeya waxay qiimeeyaan qiimeeynta kuwa doonaya qaabka dib-u-eegista iyo haysashada miisaaniyad ballaadhan. Read More »
8-da ugu fiican ee Panasonic Cameras ah oo lagu iibsado sannadka 2018
8da ugu wanaagsan ee ugu wanaagsan ee lagu iibsado sannadka 2018 ee ka hooseeya $ 500
Talo-siinta Dacwad-Qaadashada Caawimada Saxda ah
7 Qodobbada ugu ballaaran ee ballaadhan ee furan si ay u iibsadaan 2018 ee DSLR
Canon 80D Dib-u-eegis DSLR
7 Sawir gacmeedyada ugu fiican ee lagu iibsado sannadka 2018
Waa maxay Nikon Cameras?
Reigns waa sida Tinder, laakiin for Kings
8-tii ugu fiicnayd ee kuleylaha ah ee lagu iibsado sannadka 2018
Sida loo Abuuro Sawirada Muuqaal Sawirada Adobe Brush CC.
Xakamee ogeysiisyadaada Marshmallow Android
Wadayaasha Windows 7
Sida Loo Helo iPad-gaaga Apps, Music, Movies iyo More
Maxay qaar ka tirsanyihiin Diiwaanada Ma aha 100% dib loo soo celin karo?
Shabakadaha ugu Caansan ee Webka
Muuqaalka Mac Macnahay Looma Bilaashayo, Laakiin Doorashooyinkani waa
Epson's Perfection V39 Scanner Color
Qorshaha 8aad ee ugu kharashka badan ee telefoonada gacanta ee lagu iibsado sannadka 2018
Waa maxay Bothie?
U Isticmaal Mawduucyada Nooca Badan ee Shirkadda PowerPoint Presentation
Ka saar Cinwaanada laga soo magacaabo "IncrediMail's List of Auto-Complete"
Sida loo abuuro Qabiilka iyo Tiknikada ee HTML
Iskujirka Bluetune Solo: Sound Sound wuxuu ku jiraa xirmo yaryar
PC Galka Hadda v2.0
Sidee loo Soo Xaadiri Doonaa Gmail